Ụgbọ ala ụgbọ oloko Thai maka ndị ọrịa COVID-19 na-enweghị AC ma ọ bụ ụlọ mposi
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Akụkọ Ahụike » Ụgbọ ala ụgbọ oloko Thai maka ndị ọrịa COVID-19 na-enweghị AC ma ọ bụ ụlọ mposi
Akụkọ Ahụike • News • Iwughachi • Akụkọ na -emegharị na Thailand • Tourism • Akụkọ dị iche iche
Ụgbọ ala ụgbọ oloko Thai maka ndị ọrịa COVID-19
Enweghị ntụ oyi na enweghị ụlọ mposi… ma. Nke ahụ bụ ihe ndị ọrịa COVID-19 asymptomatic na-eche ihu mgbe a nabatara ha na ngalaba iche ha-ụgbọ oloko tụgharịrị.
Ndị ọrịa Thailand COVID-19 na Bangkok ndị na-eche ka a kpọga ha n'ụlọ ọgwụ ga-anọpụ iche n'ụgbọ ala ụgbọ oloko tụgharịrị.
A na -edobe ebe ịnọpụ iche a na ọdụ ụgbọ oloko eletrik nke Bang Sue Grand Station.
Ọrụ na -aga n'ihu n'ịwụnye ụgbụ anwụnta na ụlọ mposi dị na mpụga yana ijikọ ihe ndị ahụ na ọkụ eletrik na mmiri.
Ndị isi obodo Bangkok (BMA) na State Railway of Thailand (SRT) na-arụ ọrụ ugbu a imepe ebe dịpụrụ adịpụ maka ndị ọrịa COVID-19 na ọdụ ụgbọ oloko eletrik Bang Sue Grand Station.
Gọvanọ Thailand Pol. Gen. Aswin Kwanmuang kwuru na akụrụngwa a ga-abụ ebe nnabata maka ndị ọrịa COVID-19 asymptomatic na Bangkok na-eche ntinye aka na ngalaba ọgwụgwọ.
Enwere ụgbọ ala 15 na-enweghị ntụ oyi ugbu a ka a na-atụgharị ya na ngalaba iche. Ụgbọala ọ bụla nwere ike ịnabata ndị ọrịa 16, ebe a na -eji naanị obere ala. A na -arụ ọrụ iji wụnye enyo anwụnta na windo, jikọọ ihe ndị ahụ na okporo ọkụ na sistemụ mmiri, yana ịwụnye ụlọ mposi dị na mpụga.
O kwuru na ọ bụ Minista Ụgbọ njem Saksayam Chidchob malitere ọrụ a, onye nyere ndị ọrụ ụgbọ oloko steeti Thailand na ndị isi obodo Bangkok iwu ka ha guzobe otu ebe ịnọpụ ndị ọrịa ọhụrụ.